AKHRISO: Midowga Musharaxiinta Jubbaland oo digniin adag u diray Guddiga Doorashooyinka, kuna Hanjabay.
KISMAAYO(P-TIMES)- Kudlada ay ku mideysan yihiin Musharaxiinta isku diwaangaliyey Madaxweyne-nimada Jubbaland tartankeeda ayaa digniin adag u diray guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka, taas oo ku wajahan in aan dib loo furi karin jadwalka doorashada ee ay horey u xireen.
Musharaxiinta ayaa sheegay in talaabadaas hadii la qaado ay gabi ahaanba qaadici doonaan hanaanka doorashooyinka Jubbaland, waxayna sheegeen in ay guddigaas u hogaansameen amaradii uu soo saaray maalmihii ugu horeysay.
HALKAN KA DAAWO WARARKA DOORASHADA
Guddigu waxay sheegeen in ay buuxiyeen dhammaan sharuudaha uu dhigayey habraaca doorashooyinka, waxayna kaloo sheegeen in dhaqaale, maskax iyo waqtiba ka galay tartamka doorashada.
Sidaas oo kale, guddigan waxay ka digeen in ay jiraan ficilo la doonayo in dib loogu furo waqtiga is diwaangalinta doorashada Madaxweyne-nimada, taasna ay ka dhalan doonto natiijooyin aan la mahdin.
Guddiga Doorashooyinka madaxa banaan ee Jubbaland waxay dhawaan diideen in ay aqbalaan dalab uga yimi beesha Caalamka oo ahaa in dib loo furo waqtiga isdiwaangalin musharaxiinta, waxayna sheegeen in ay taasi dhaceynin, maadaama ay soo dhajiyeen habraaca doorasho.